गेमिङ परिवर्तन व्यक्ति अनि बुथ कैशियर अय्यूब विवरण / कार्य अनि जिम्मेवारी टेम्पलेट – JobDescriptionSample.org
घर / असंगठित / गेमिङ परिवर्तन व्यक्ति अनि बुथ कैशियर अय्यूब विवरण / कार्य अनि जिम्मेवारी टेम्पलेट
superadmin जुन 28, 2016 असंगठित7टिप्पणीहरू 1,662 दृश्य
विनिमय नगद, टोकन, र customersA डलर लागि चिप्स. बिल र payoffs मा खरीदार को हस्ताक्षर प्राप्त जारी हुन सक्छ. गणना सक्छ र दराज मा कराधान पैसा, वा स्लट मिसिन ठाउँमा एक cubicle सञ्चालन र कदम को सुरुदेखि मान्छे बदल पैसा बैंक आपूर्ति.
क्यारियर कौशल चाहिन्छ
डलर र कराधान धन दराज निर्भर.
खरिद reconciliations को उपयुक्त रेकर्ड कायम, प्राधिकरण प्रजातिहरू, र आर्थिक आदानप्रदान.
स्वाप क्रेडिट, र क्यासिनो चिप्स, र सिर्जना खरिदकर्ताहरूको लागि समायोजन.
Jackpot चेतावनी Bells र समस्या payoffs लागि विजेता सुन्न.
अनुसार सिद्धान्त मा कुत्ताघर सुरक्षा राख्न.
स्थिरता प्रकाशनहरू सम्झौताहरू को दैनिक सारांशमा मिलन हुनु.
जहाँ स्लट-मिसिन पाउन सकिन्छ Workin र क्यासिनो भुइँमा तोकिएको छ कि एक क्षेत्र जाँच.
भुक्तानी एक स्लट-मिसिन मा कुल रकम पार गर्दा रसिद मा clientsA हस्ताक्षर प्राप्त.
गेमिङ प्रस्ताव चिप्स, resell अन्य कर्मचारीहरु गर्न संरक्षक को टिकट, संरक्षक वा, वा टोकन.
निर्धारण सहभागीहरू प्राप्त गरेका थिए वा गलत चिप्स को योग्यता द्वारा.
मान्छे परिवर्तन गर्न प्रत्येक स्थानान्तरण को सुरुदेखि एक पैसा-बैंक सजाउनु.
घर क्रेडिट खाता स्थापित गर्न लाग्न क्रेडिट आवेदन र क्रेडिट उल्लेख जाँच्न-सटही स्वीकृति आपूर्ति गर्न प्रमाणित वा.
यस्तो उदाहरण खाली नगद जाम लागि रूपमा कार्यान्वयन, slotmachines मा सानो मरम्मत.
क्यारियर कुराहरूलाई आवश्यकता
पढेर बोध-जानने काम-सम्बन्धित कागजातहरू मा वाक्य र रेखा तयार.
सक्रिय अन्य भन्न के को श्रवण-दिंदै पूरा जागरूकता, को कारक बुझ्न समय प्राप्त गरे भइरहेको, सही रूपमा अनुरोध मुद्दाहरू, र कहिल्यै अस्वीकार्य छन् भनेर क्षणमा मा mesmerizing.
प्रकाशन-मा कागज भीड सफलतापूर्वक कुरा को आवश्यकताहरु लागि रूपमा उपयुक्त.
कुशलतापूर्वक जानकारी व्यक्त गर्न अरूलाई बोल्ने-कुराकानी.
ठीक समस्याको गणित गणित-प्रयोग.
विज्ञान-प्रयोग समस्या समाधान गर्न समाधान र नियन्त्रण नियम.
कि महत्वपूर्ण-लागू कारण र परिणाम लाभ र बेफाइदा पहिचान कारणहरू सोच छ, समस्याहरूको वैकल्पिक विकल्प वा दृष्टिकोण.
प्रत्येक वर्तमान र भविष्य समस्या समाधान र निर्णय-बनाउने सन्दर्भमा सक्रिय प्रशिक्षण-Comprehending ताजा जानकारी दिएको महत्त्व.
शिक्षण अंक नयाँ हो कि अध्ययन गर्दा वा नजिकिंदै-छनौट सिक्ने र trainingORinstructional नजिकिंदै प्रयोग र स्थिति को लागि उपयुक्त प्रक्रियाहरु.
जाँच-निगरानी / आफूलाई को प्रभावकारिता खोजी, थप छन् कि मान्छे, वा संवर्द्धन वा सुधारात्मक कदम विचार कम्पनीहरु.
सामाजिक अरूलाई थाह Perceptiveness-हुँदा’ प्रतिक्रिया तिनीहरूले के र comprehending किनभने तिनीहरूले किन प्रतिक्रिया.
othersI कदम को मामला मा कार्यहरू नियन्त्रण-समायोजन.
मनाउनु-पत्यार पार्र्ने व्यवहार वा तिनीहरूको intellects सुधार गर्न अरूलाई.
बन्दोबस्त-लिएर अरूलाई सँगै र भेरिएसनहरूमा मिलाप गर्न देख.
निर्देश-शिक्षित अरूलाई कदम बनाउन कसरी गर्ने.
सेवा अभिमुखीकरण-सकारात्मक मान्छे सहायता रणनीति खोजिरहेका.
विकसित समस्या-समाधान-निर्धारण उन्नत दुविधाओं र सम्बन्धित मूल्याङ्कन छ जानकारी समीक्षा र माथि विकल्प निर्माण र समाधान लागू गर्न.
अपरेसन मूल्यांकन-निरीक्षण आवश्यक र समाधान पूर्वापेक्षा एक शैली सिर्जना गर्न.
प्रविधि डिजाइन-प्रविधिको व्यक्तिगत र उपकरण स्थापना वा उत्पन्न इच्छा काम गर्न.
उपकरण चयन-निर्धारण उपकरण र उपकरण गरेको प्रकारको कार्य गर्न आवश्यक.
Installment-स्थापना उपकरण, मिसिन, ताराहरु, वा कार्यक्रम साधारण सुविधाहरू भेट्न.
विभिन्न उद्देश्यका लागि कार्यक्रम-लेखन कम्प्युटर प्याकेजहरू.
सञ्चालन निगरानी-हेर्दै knobs, आकलन, वा उपकरण सुनिश्चित गर्न विभिन्न संकेतहरू सही काम गरिरहेको छ.
उत्पादनहरू वा प्रणाली को कार्य कार्य र व्यवस्थापन-बचाव.
उत्पादनहरु मा तालिका छ कि upkeep मर्मत-प्रदर्शन र निर्धारण upkeep कस्तो आवश्यक हुँदा र.
अपरेटिङ blunders कारणहरू समस्या निवारण-निर्णय र यसलाई कुनै पनि बारेमा अगाडि बढ्न कसरी छान्ने.
आवश्यक छन् भनेर उपकरण उपयोग उपकरणहरू वा विधि पुनस्थापित-मिलाउँदै.
गुणस्तर नियन्त्रण वस्तुहरूको परीक्षण र निरीक्षण परीक्षा-प्रदर्शन, सेवाहरू, वा गुणस्तर वा दक्षता मूल्याङ्कन गर्न प्रक्रियाहरु.
हेर्नुहोस् र सम्भावना छ कि कार्यहरूको तुलनात्मक मूल्यहरु र लाभ Decisionmaking-विचार सबै भन्दा उपयुक्त एक चयन गर्न.
विश्लेषण-चिन्ने सेटिङ बस कसरी सुधार, अपरेसन, र अवस्था परिणाम असर गर्नेछ र प्रविधी कस्तो प्रदर्शन गर्नुपर्छ.
विधिहरू उचित साथ प्रदर्शन को विधिहरू वा संकेत विश्लेषण-चिन्ने वा गतिविधिहरु कार्यक्षमता बलियो बनाउन आवश्यक, प्रणाली को लक्ष्य सापेक्षित.
एक व्यक्तिगत अवसर पनि अरूलाई Timemanagement-प्रबंध’ अवधि.
को सञ्चालन मुद्रा-निर्णय कसरी डलर पूरा कार्य प्राप्त गर्न निवेश गरिनेछ, र यी लागत को लागि लेखांकन.
पदार्थ सञ्चालन संसाधन-हासिल र सेवाहरू उपकरण को को आदर्श प्रयोग तिर खोजी, र घटक आपूर्ति विशेष समारोह गर्न आवश्यक.
मजदुर को अपरेसन संसाधन-उत्तेजक, विकास, तिनीहरूले काम र मान्छे खेलकुद, आफ्नो पेशा लागि शीर्ष मान्छे pinpointing.
शिक्षा चाहिन्छ अनुभव चाहिन्छ
वरिष्ठ हाई स्कूल डिग्री (GED वा वरिष्ठ विद्यालय Equivalence प्रमाणपत्र वा)
कम भन्दा एक हाई स्कूल डिप्लोमा
धेरै विद्यालय कार्यक्रम
संकल्प – 87.05%
प्रयास – 87.08%
नियन्त्रण – 87.27%
सहायताको – 89.96%
अरूलाई चिन्ता – 88.32%
सामाजिक पंक्तिबद्ध – 86.73%
दबाव थ्रेसहोल्ड – 89.33%
विवरण को जानकारी – 91.95%
स्वतन्त्रता – 84.99%
प्रगति – 86.97%
विश्लेषणात्मक सोचाइ – 87.80%
February 7, 2019 मा 8:11 बजे
सक्छ 2, 2019 मा 10:05 बजे
Pingback: Does Your Resume Scream| | मेट्रो
Pingback: Persistence In Job Hunting Will Are Worth It – आकाश डाटा समूह
Pingback: Nursing Job Descriptions Along With An Involving The Are Employed At Hand - TG ...(Dandanah, हिल्सबर्ग, माजाज, BoomBoom)